Hiob anoyi (1-34)
‘Adɛn nti na abɔnefo di yiye?’ (7-13)
Ɔmaa obiara huu sɛnea “n’awerɛkyekyefo” no te (27-34)
21 Ɛnna Hiob kae sɛ: 2 “Monyɛ aso ntie m’asɛm yi yiye,Na momfa ɛno nkyekye me werɛ. 3 Munnya me ho abotare na menkasa;Sɛ mekasa wie na mubedi me ho fɛw a, munni.+ 4 Onipa na meka me haw kyerɛ no anaa? Sɛ saa a, anka m’abotare* nsae anaa? 5 Monhwɛ me; montɛɛ mo anom nhwɛ me.Momfa mo nsa nto mo ano. 6 Sɛ midwen ho a, na mayɛ basaa;Ɛba saa a, na me ho repopo. 7 Adɛn nti koraa na abɔnefo kɔ so tena ase?+Adɛn nti koraa na wonyin kyɛ, na wonya ahode bebree?*+ 8 Daa wɔn mma wɔ wɔn anim,Na wohu wɔn asefo mpo. 9 Wɔn afi mu adwo; ehu biara nni hɔ.+Ɛnyɛ ade a Onyankopɔn de n’abaa twe wɔn aso. 10 Wɔn anantwinini foro anantwibere pɛ, na wɔanyinsɛn;Wɔn anantwibere wo, na wɔmpɔn. 11 Wɔn mma mmarima tu mmirika wɔ abɔnten te sɛ nguankuw,Na wɔn mma huruhuruw. 12 Wɔde mpintin ne asanku to dwom,Na wɔbɔ atɛntɛbɛn di ahurusi.+ 13 Wɔn nkwa nna nyinaa wɔn ani gye,Na wɔde asomdwoe sian kɔ* Ɔdamoa* mu. 14 Nanso wɔka kyerɛ nokware Nyankopɔn no sɛ, ‘Gyaa yɛn! Yɛmpɛ sɛ yehu w’akwan.+ 15 Hena ne ade nyinaa so Tumfo no a enti ɛsɛ sɛ yɛsom no?+ Na sɛ yehu no a, dɛn paa na yebenya?’+ 16 Nanso minim sɛ wonni wɔn yiyeyɛ so tumi.+ Me ne nnebɔneyɛfo nsusuwii* nni hwee yɛ.+ 17 Mpɛn ahe na wodum abɔnefo kanea?+ Mpɛn ahe na amanehunu to wɔn? Mpɛn ahe na Onyankopɔn sɛe wɔn wɔ n’abufuw mu? 18 Da bɛn paa na abɔnefo yɛe sɛ sare a mframa rebɔ no?Anaa da bɛn na ahum huw wɔn kɔe sɛ ntɛtɛwa? 19 Onyankopɔn de onipa asotwe bɛto hɔ ama onipa no ara mma. Nanso ma Onyankopɔn ntua onipa no nso ka mma onhu sɛnea ɛte.+ 20 Ma ɔmfa n’ankasa ani nhu ne sɛe,Na ɔnnom ade nyinaa so Tumfo no abufuw.+ 21 Efisɛ sɛ wotwa abosome dodow a ɔde bɛtena nkwa mu no so* a,Nea ɛbɛto n’asefo* biara mfa ne ho.+ 22 Obi betumi akyerɛkyerɛ Onyankopɔn ama wanya nimdeɛ*+Bere a Ɔno na obu atitiriw paa atɛn no?+ 23 Obi wu bere a ɔwɔ ahoɔden paa,+Bere a onni haw biara na ne ho adwo no,+ 24 Bere a ne srɛ ayeyɛ akɛse,Na ne nnompe mu ayɛ den* no. 25 Na obi nso de, ɔde awerɛhow kɛse* na ɛkɔ owu mu,Bere a ɔnkaa nneɛma pa mpo nhwɛe da. 26 Wɔn nyinaa, dɔte mu na wɔbɛkɔ akɔda,+Na mmoawa bɛkata wɔn baanu nyinaa so.+ 27 Hwɛ! Minim nea moredwen ho nyinaa,Na minim adwene a moafa sɛ mobɛyɛ me bɔne* no.+ 28 Efisɛ mubisa sɛ, ‘Onipa titiriw no fi wɔ he?Na ɛhe na ntamadan a ɔbɔnefo no tenaa mu no wɔ?’+ 29 Adɛn, mummisaa akwantufo? Na monhwehwɛɛ nea wɔahu no* mu yiye? 30 Ɛmma munhui sɛ ɔbɔnefo fa ne ho di amanehunu da,Na wogye no abufuw da anaa? 31 Hena na ɔbɛka asi n’anim sɛ ne kwan nye?Na nea wayɛ no, hena na obetua no so ka? 32 Sɛ wɔde no kɔto ɔdamoa mu a,Wobesi pɛ wɔ ne nna so. 33 Dɔte atɔwatɔw a ɛwɔ bon mu bɛyɛ no dɛ,+Na nnipa nyinaa bedi n’akyi,*+Sɛnea nnipa a wɔn dodow nni ano dii n’anim no. 34 Enti adɛn nti na moma me awerɛkyekye hunu?+ Mo nsɛm a moka nyinaa, hwee nnim; nnaadaa nko ara!”
^ Anaa “wonya tumi.”
^ Anaa “Na prɛko pɛ, wosian kɔ,” kyerɛ sɛ, wɔn wu ba prɛko pɛ a wɔnte yaw biara.
^ Anaa “afotu; pɔw.”
^ Anaa “wɔkyɛ abosome dodow a ɔde bɛtena nkwa mu no mu abien.”
^ Anaa “ne fi.”
^ Anaa “obetumi akyerɛ Onyankopɔn biribi.”
^ Nt., “ne nnompe mu hon ayɛ sɔkyee.”
^ Anaa “ɔkra awerɛhow.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “mubedi me awu.”
^ Nt., “wɔn nsɛnkyerɛnne no.”
^ Nt., “ɔbɛtwe nnipa nyinaa adi n’akyi.”